IRGA: GURYAHA MUHIIMKA AH, ISTICMAALKA IYO KA HORJEEDA - IRGI FLOWERS
Laga yaabe Irga waa magaca Mongolian macnaheedu yahay "adag". Deegaanka dabiiciga ah, irga waxaa loo qaybiyaa ku dhawaad ​​dhammaan qaaradda dhul-duurka. Korinka (magaca labaad ee irgi) waa warshad isbitaal ah, wax walbana waa waxtar u leh: laga bilaabo cagaarka ilaa berry.
Waa maxay irga faa'iido leh
Iyada oo ay sabab u tahay ka kooban, irga wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh.Sidaa darteed, dhirtaas waxaa ka mid ah: pectins, mono- iyo disaccharides, acids organic (malic), fiitamiinada kooxda B, vitamin C, fitamiin P, tannins, flavonols, sterols iyo cellulose. Tilmaamo waxtar leh (lead, cobalt, copper) ayaa sidoo kale buuxiya liiskan.
Irga ficil ahaan kuma jiraan borotiinka iyo dufannada, kaliya karbohidraat (ilaa 12 g halkii 100 g ee wax soo saarka), qiimaha tamarkuna waa 45 kcal halkii 100 g ee sheyga. Tani waxay dhirta ka dhigaysaa mid faa'iido leh dadka doonaya in ay lumiyaan miisaanka. Casiirka ee shadberry iyo currant cas, leh nafaqo haboon iyo isticmaalka joogtada ah, waxay yareysaa miisaanka ilaa afar kg toddobaadkii. Si tan loo sameeyo, qaso juuska cabbirida hal ilaa hal iyo isticmaal maalin kasta (hal galaas kadib cuntada).
Geedka waxaa ku jira xaddi badan oo carotene ah, taas oo, wadajir ahaan ascorbic acid, waa antioxidant dabiici ah oo adag. Walxahani waxay xoojiyaan nidaamka difaaca, yareeyaa calaamadaha cudurada la xidhiidha shucaaca elektromagnetic, kor u qaadista iska caabinta cudurrada faafa iyo walbahaarka, ka dhaadhiciso niyad-jabka.
Antioxidants waxay saameyn xun ku yeelanaysaa unugyada kansarka, iyo isticmaalka joogtada ahi wuxuu door ka qaataa doorka tallaalka prophylactic-ka ee ka hortagga burooyinka. Maadooyinkaas ayaa ka caawiya daaweynta cudurka Alzheimers - dhaawaca daran ee nidaamka dareenka.
Pectins waxay kor u qaadaan saafiga ah ee cusbooyinka maadooyinka culus, sunta, radionuclides, burburiya jimicsiyada kolestaroolka. Geedka Irga waa bakhaarka hantida waxtarka leh. Qaybaheeda ayaa dhuuban dhiig, nadiifinta derbiyada xididdada dhiigga, ka hortagga dhacdooyinka dhiigga xinjirta iyo cudurada kale ee xididdada dhiigga, iyo sidoo kale hagaajinta shaqada wadnaha.
Ma taqaanaa? Irga, sida dhirta qurxinta waxaa lagu yaqaanay qarnigii XVI. Waxaa lagu beeray beeraha, beeraha iyo waliba, iyagoo isticmaalaya xayndaab ku nool. Cawska xooggan ee geedkan waxaa loo isticmaalay wax soo saarka caanaha iyo ramrodska.
Qodobbada waxtarka leh ee caleemaha berry berry ah
Ujeedooyinka daaweynta, jilif ee geedka waxaa la goostay dhamaadka guga. Faa'iidada ugu weyn ee Irgi Kabaha ee jirka bani-aadmigu wuxuu ku yaalaa sifooyinka ka hortagga, ka sokow waxa ay hodan ku yihiin fareerka. Fayodhooyinka ku jira fareeshooyinka ayaa joojin kara dhiigbaxa, xoqin kara jeermi-ku-dillaac haddii ay dhacdo in sumoobaan oo ay gacan ka geystaan ​​dib-u-nooleynta jirka ee heerkulka.
Laga soo bilaabo jilif samee decoctions iyo infusions, kuwaas oo loo isticmaalo daaweynta gastritis, colitis, enterocolitis iyo cudurada kale ee mareenka caloosha. Tincture waxay sidoo kale ka caawisaa dhibaatooyinka cirridka, stomatitis iyo raajivitis. Waxay sidoo kale ku luqluqaan jeermiska bakteeriyada. Qalalaha bogsashada ee jilicsan ee rhiza ka caawiya dhibaatooyinka indhaha sida xanuunka foosha, indho la'aanta habeenkii, kateecada iyo bararka xiidmaha.
Recipe for shubanka: 1 dh oo ah jilif qallalan oo engegan ayaa lagu qasan yahay 200 ml oo biyo ah. Maraq waxaa lagu diyaariyaa qubeys biyo ah. Daaweynta cudurada ilkaha: cayayaanka la jarjaray (1CT l), ku shub biyo (200 ml) oo isku kari ilaa 20 daqiiqadood. Maraqku wuxuu ku adkeeyaa nus saac, ka dibna sifeeyaa. Halabuurka soo baxa waa in uu afuufiyo afkaaga saddex jeer maalintii.
Isticmaalka caleemaha irgi ee ujeedooyinka daawooyinka
Caleemaha geed ama geed ayaa sidoo kale leh tiro ka mid ah guryaha waxtar leh (waxaa lagu ururiyaa dhamaadka guga). Phytoncides ku jira caleemo ka soo horjeeda cudurrada faafa: tonsillitis, ARVI, ARD, iyo saamaynta antimicrobial waxaa loo isticmaalaa daaweynta nabarrooyinka nadiifka ah, furan iyo dhiig-baxa, sariiraha.
Guryaha cimriga ee caleemaha waxay ka caawiyaan feerikiska iyo shubanka. Faleebo iyaga oo cabaya cabsida, cadaadiska dhiig karka, cudurada wadnaha.
Carruurta yaryar waxay u nugul yahiin cudurrada faafa, sidaa darteed isticmaalka yar ee antibiyootigyada dabiiciga ah ee ka hortagga qufaca, bukaanada yaryar waxaa la siin karaa nafaqo cagaaran. Waxay leedahay ficil-qaadid iyo ficil-celin.
Waa muhiim! Carruurta da'doodu ka yar tahay laba sano waa in la siiyaa xaddiga ugu yar, maadaama ay ka kooban tahay alerjiyo badan.
Ku orodka deyrka, carruurta badanaa naftooda ayey wax u geystaan, iyo Caleemaha Irgi waa antiseptic dabiici ah oo wanaagsan. Si fudud u xir suufka suufka ah ee la mariyo maraqa nabarka, ama isla markiiba nadiifi caleen cusub oo dhirta ah mudo ah.
Shaaha ka soo caleemaha irig ayaa leh fiitamiin waxayna xoojisaa nidaamka difaaca jirka. Casiirka caleemaha ayaa leh saameyn cunto iyo miisaan hoos u dhacaya, sidoo kale, infusions noocan oo kale ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa kiknoolojiyada. Lootions iyo tonics waxay joojiyaan maqaarka maqaarka, adkaynta dhaska, nadiifinta maqaarka, dib u soo celiya lakabka laf-dhabarka, xoojinta ciddiyaha iyo timaha.
Wixii saameyn ku soo cusboonaadey, waa inaad tirtirtaa wejigaaga iyo qoorta adoo siisocda caleemaha (doorbididda laba jeer maalintii). Halabuurka waxaa lagu shubi karaa taangiga oo leh falejo oo si joogto ah u buufinaya qoorta.
Reqshadu waxay ku talineysaa geedi socodka bararka afka ee nabarrada afka ama nabarrada: Caleemaha qallalan - 2 qaado oo waa in lagu qasi karaa 200 ml oo biyo nadiifa ah oo lagu mudo 30 daqiiqo. Cudurrada afka ee afka ah - raaci ka dib markaad wax cunaysid, boogaha - saliida suufka.
Sidee iyo sababta ay u qaataan ubax irgi
Wax qarsoodi ah maaha haweenka uurka leh way jiran yihiin marar badan, sababtoo ah jidhku wuxuu shaqeeyaa labo. Daawooyinka kiimikada badanaaba waxay u geystaan ​​ilmaha aan dhalan, iyo dhibaatooyinka cadaadiska, ilkaha, cudurrada wadnaha iyo cudurada faafa ma aha wax aan caadi ahayn haweenka oo ku jira booska.
Flowers irgi, guryaha dabiiciga ah ayaa faa'iido u leh hooyooyinka sida daaweynta iyo ka hortagga. Faleebo ee ubaxa waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga, wuxuu leeyahay anti-bararka, tallaalka immunomoduliruyuschee iyo ficilka antimicrobial. Shaaha oo ku saleysan ubax ayaa sakhraamaya si looga hortago caabuqyada ba'an iyo caabuqyada fayraska.
Daawooyinka iyo qaadashada ubaxyada ayaa la isticmaalaa ka dib marka loo daaweeyo kemotherabi daaweynta cudurka kansarka, si loo kabo. Neefsashada leh maraqyada waxay caawisaa haweenka qaba cudurrada cudurada dumarka iyo cystitiska. Maraqyada iyo tinctures waxay yareynayaan calaamadaha cudurka qanjirka thyroid.
Qubeyska leh ubax yaryar oo leh sifooyin qurxin leh maqaarka maqaarka, ka saaro sunta iyo xeryahooda kale ee waxyeellada ah ee la mariyo daloolada, samaynta maqaarka oo dusha sare leh. Kareemada ubaxa waxay wajiga u eegaan muuqaal caafimaad leh. Qoraal loogu talagalay haweenka uurka leh ee qaba dhiig-karka: 2 qaado oo qalajiyey ama ubax cusub ku shub 400 ml biyo karkaraya. Si fiican u duub halabuurka oo ka tago dhowr saacadood si aad u adkeyso, ka dibna cadaadis. Qaado hal qaado oo cunto ka hor, saddex jeer maalintii.
Waa muhiim! Ubaxa caanuhu wuxuu leeyahay saameyn macquul ah oo uu keeno lulmo, markaa kadib markaad qaadato waa in aadan isla markiiba helin gawaarida gaari ama shaqo leh qalab u baahan feejignaan wanaagsan.
Guryaha dawooyinka ee berry irri
Midhaha shadberry waxaa si firfircoon loo isticmaalaa labadaba dawooyinka dadweynaha iyo kuwa rasmiga ahba. Dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in bukaanada waayeelka ah ay u isticmaalaan berry sidii looga hortagi lahaa xididdada xajmiga leh, atherosclerosis, xanuunka miyokardiyanka, iyo sidoo kale inay xoojiyaan darbiyada xididdada dhiigga iyo jirka oo dhan.
Miraha dhirta ee dhirta ayaa awood u leh in ay ka soo baxaan walxo waxyeelo leh oo ka yimaada jawiga iyo kolestaroolka jirka. Irga iyo nooca berry waxay faa'iido u leeyihiin daaweynta dhibaatooyinka wadnaha, hurdo la'aan, xanuunka dareemayaasha, iyo xoqidda saameynta diiqada.
Casiirka Berry waxaa lagu qaadaa xanuunka caloosha iyo mindhicirrada, maxaa yeelay falalkeeda astaamaha ah ayaa ka caawiya gumaacad, ka qaadista caabuqa derbiga caloosha. Juice waxay leedahay saameyn cunto.
Fitamiin A, kaas oo hodan ku ah berryberry, iyadoo si joogta ah loo isticmaalo hor istaagidda horumarinta caadka, waxay hagaajinaysaa aragga. Si looga fogaado cillad la'aanta iyo la'aanta fiitamiinada cuntada, waxaa lagugula talinayaa in aad cabto shaaha berry. Khudaarta cagaaran ee cusub ayaa cirib tira calaamadaha xanuunka badan ee kilyaha nudaha iyo stomatitis. Faytamiin cabitaan: miraha qallalan ku shub biyo karkaraya (1 tbsp L. halkii 200 ml oo biyo ah) kuna adkeyso 30 daqiiqo. Cab miridh nus nus maalin kadib cuntada.
Isticmaalka irig ee karinta
Irga waxaa loo baahan yahay cunto karinta, laga bilaabo waxaad ku karsan kartaa waxyaabo badan oo macaan iyo caafimaad leh, macmacaanka badankood. Berry qallalan waxay u egtahay sabiibta waxaana loo isticmaalaa sida buuxinta pies, keega iyo keega. Irgu waa la jaraa, waxaana loo isticmaalaa in la sameeyo koobabka, digirta, canjeelada, iyo jajab. Wixii macmacaanka iyo suxuunta ugu muhiimsan, marka lagu daro berry irgi diyaariyo suugo.
Miro yar oo caleemo ah ayaa u fiican dawooyinka, macaawinada iyo kiriimka. Jelly, marmalade, marshmallow, sorbet ayaa laga sameeyaa. Miro Cusub waxaa lagu kariyaa cabitaan, jelly, casiir iyo cabitaano fudud. Khamriga iyo aalkolada khamriga ah ee ka yimaada irji waxay leeyihiin waxyaabo ka soo horjeeda anti-barar, waxay noqon karaan keega loo yaqaan 'keega'.
Waxay ku habboon tahay in la beero berry xilliga jiilaalka. Irguugyada la qalajiyey ama la qalajiyey ayaa loo isticmaalay sida miraha la qalajiyey, compote, shaah iyo fiyuusyada daawooyinka. Laga soo bilaabo waxay diyaarisaa macaanka, macaanka iyo macaanka, waxaa loo isticmaalaa midabka cuntada. Jam waxaa lagu kaydiyaa waqti dheer waxayna sidoo kale u adeegi kartaa sida buuxinta dameeraha iyo bagisyada.
Nafaqadayaasha waxay ku talinayaan in ay isticmaalaan irgu sidii caadiga ah ee dheef-shiid kiimikaad, haddii ay dhacdo xanuunada dheefshiidka, iyo sidoo kale in la nadiifiyo jirka sunta. Berryada la qalajiyey waxaa lagu daraa saladh, firiley iyo suxuunada dhinaca.
Xilliga xagaaga oo kulul Daadinta haraadkaagu wuu caawinayaa kvass ka soo berry ah ee irgi. Diyaarso sida tan: Irga - 1 kg ee berry, khamiir - 25 g, biyaha - 10 litir, malab - 200 g. Mash ee berry dhaqday ee digsi dhaldhalaalka, ku dar biyo, isku kari ah iyo qabow. Cadaadiska maraq la qaboojiyey, ku dar malab iyo khamiir oo ka bax inaad halsano 12 saacadood. Cabitaankii la dhammeeyey waxaa lagu shubay weelal fudud oo lagu kaydiyaa meel qabow.
Xiiso leh Markii ugu horraysay, North American Americans waxay isticmaalaan berry shadberry si ay u hagaajiyaan dhadhanka hilibka duurjoogta ah, iyo laga bilaabo 1800, Canada, shadberry waxay noqotay walxo cayriin ah oo loogu talagalay winemaking. Breeders keeno noocyo leh berry waaweyn iyo fruiting sare. Mid ka mid ah baadiyaha ayaa bixiyay wax ka badan toban kiilo.
Irgi wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh oo aan macquul aheyn wax khatar ah, marka laga reebo dhawr wado. Tusaale ahaan, irgu waa in la taxaddaraa dadka qaba dhiig karka iyo haweenka inta lagu jiro nuujinta. Intaa waxaa dheer, warshadani waxay leedahay saamayn saameyn ku leh jirka, sidaas darteed, isla markiiba ka dib marka la cuno, baabuur wadidda laguma talinayo ama shaqo u baahan dareen dheeraad ah.
Qofka xasaasiga ah iyo carruurta da'doodu ka yar tahay laba sano waa inay bilaw inaad ka qaadatid irgi tiro yar, dhegeysi dareen-celinta jirka. Haddii cudurka sonkorowga ee nooca labaad, isticmaalka warshadani waa suurtogal kaliya ka dib markii uu la tashado takhtarka ka qaybgalay.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Irgi Flowers 2019